Hi, waxaan ku faraxsanahay in aad ku biiri on Wondershare inuu kaa caawiyo inaad barato sidii aad u isticmaali Apple Final Cut Pro X software video tafatirka.
Erayga deg deg ah nafsadeyda. Waxaan la isticmaalayo, qoraal ku saabsan iyo tababar ku saabsan Final Cut Pro muddo ka badan 10 sano. Waxaan dunida oo dhan socdaal ku barayay tifaftirayaasha sida in sheekadooda in sawiro. Oo weliba waxaan kaa caawin kara inaad xariif software si aad naftaada u sheegi kartaa sheekooyin.
Iyo in erayga furaha ah: ka sheekeynta sheeko. Video tafatirka waa technology qayb oo qayb ka sheekeynta sheeko. Waxana si, oo qof ayaa waqti dheeraad ah daawashada cajaladaha badan yihiin ay akhriska. Taas macnaheedu waa in haddii aad rabto in ay gaaraan qoyskaaga, saaxiibadaa, ama guud ahaan caalamka, waxad ka heli kartaa dad badan si degdeg ah oo la soo bandhigay badan leh wax kasta oo aad ku qorto.
Taasi waa meesha aan ku caawin karo. Habka ugu fiican ee aad ka fikirto video tafatirka waa in ay tahay geeddi-socod - socodka ah - ka bilaabo si loo soo afjaro. Marka aad raacdo socodka, sheekadaada si dabiici socodka ka-awaalkooda si ay shaashadda. Marka aad ula dagaalamaan socodka, waxaad ku Bixisaan ka badan dhibaatooyinka qamaar waqti badan oo aad samayn tafatirka.
Aniga ahaan, waxa uu leeyahay socodka iyo toban tallaabo:
Tallaabada 1. Plan
Waan ogahay, tan aanu ka dhawaajin sida badan oo xiiso leh. Laakiin, marka aad safar, haddii aadan qorsheeyo aad halka aad u socoto, sida aad ku ogaan doonaa marka aad timaado? Ka fikir waxa aad doonayso in aad qabato iyo sida aad u rabto in aad u sameeyo, marka hore. MARKAA, bilowdo tafatirka.
Tallaabada 2. gan aad mashruuca
Tan waxa loo yaqaan "wax soo saarka", oo waa qaybta ugu cad ee ka sheekeynta sheeko jilayaasha, agaasimaha, iyo shaqaale ku wareegsan oo dhan iyagoo ordaya oo mashquuli. Ha la yaabin in la ogaado in aadan haysan waqti ku filan in ay toogtaan wax walba. Ma jirto waqti ku filan. Taah ... waxaan kaliya u baahan tahay in loo isticmaalo in.
Tallaabada 3. dejinta warbaahinta aad
Tani guuro warbaahinta ka camera ah nidaamka tafatirka aad. Waa kuwee, noo, waxay ka dhigan tahay Final Cut Pro X.
Tallaabada 4. Abaabulaan warbaahinta aad
Go'aanso sida aad rabto in aad u magacaabay, waxa darbo aad rabto inaad xajisaan oo taas oo in laga takhaluso. Marnaba ma isticmaalaan wax kasta oo aad ku soo gani.
Tallaabada 5. Edit sheekadaada
Tani waa habka dhismaha darbo galay "Mashruucan" si markaad doonto si, aad sheeko ka soobixi.
Tallaabada 6. jar sheekadaada
Kani waa geedi socod ee la qabsado, meeshii laba clips taabto si guurka ka mid shot ku xiga waa sida siman oo aan la arki karin sida ugu macquulsan.
Tallaabada 7. kala guurka Add
Waxaa jira saddex qaybood oo kala guurka: jeexan, u kala diray oo masarka. Mid kasta oo abuuri dareen ka duwan oo mid kasta oo loo isticmaalo waxyaabo kala duwan. Ku dar kala guurka marka falinjeeerka waa dhameystiran yahay.
Tallaabada 8. horyaal Add
Horyaal loo isticmaalaa in lagu sheeg daawadayaasha wax ay tahay in aan ka heli kartaa hab kasta oo kale; Tusaale ahaan, magaca qofka hadlaya.
Tallaabada 9. saamaynta Add
Raadka waa qayb ka mid xiiso leh, laakiin ku daray saamaynta marka sheekada ma dhamma waa waqti lumis. Sidoo kale, ay qorshaynayaan in ay mar FAR dheeraad ah ku qaataan ka shaqeeya saameynta badan ee aad waligaa filan. Sababtoo ah saamaynta ay qaataan waqti si ay u eegaan kaamil ah.
Tallaabada 10. qas aad audio
Habka ugu fiican si loo hagaajiyo tayada sawirka waa si aad u hagaajisid dhawaaqa. Final Goo badan oo qalabka audio weyn.
Tallaabada 11. Sii mashruuc "eegto"
U dayactir dhibaatooyin midabka ama abuuro looks dareenka sidii tallaabo la soo dhaafay ka hor inta wax soo saarka.
Tallaabada 12. Output aad Project
Markii wax walba la sameeyo, aad mashruuca wax soo saarka iyo badbaadin warbaahinta oo dhan ay dhacdo in weligoodba aad u baahan tahay in ay dib-u-edit waxa.
Waxay u muuqataa sidii badan oo tallaabooyin, taas oo ah sababta is abaabulay waa mid muhiim. Laakiin, marka aad la socodka, waxaad yeelan doontaa yaabeen sida xawliga waxaad samayn kartaa sheekooyin awood in dadka kale ee doonaya in ay daawadaan.
Inta u dhaxaysa saddex naga mid ah - aad, aniga iyo Wondershare - waxaan kaa caawin karaa inaad u sheegto qaar ka mid ah sheekooyinka la yaab leh.
More Cut Pro Final Casharrada:
> Resource > Video > 12 Tilaabo oo xagga wanaagsan Video Faalladaada